Ahoana ny fomba fanaovana montage sary tsotra ao amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba fanaovana montage sary tsotra ao amin'ny Photoshop
Lola curiel | | Fitaovana famolavolana, Photoshop, Tutorials
Photoshop dia iray amin'ireo programa famolavolana sary ilaina indrindra amin'ny fanaovana photomontages tena izy. Miaraka amin'ny fikafika vitsivitsy ary mampiasa teknika samihafa azonao atao ny mamorona firaketana tsy mampino. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko ny sasany amin'izy ireo. Avy amin'ny ohatra, Hampianariko anao ny fomba fanaovana photomontage tsotra ao amin'ny Photoshop tsikelikely Aza dia taraina!
1 Sokafy ny sary dia safidio ny lohahevitra
1.1 Ahoana ny fomba hamerenana ny alokaloka Photoshop
2 Ento ny antontan-taratasy roa amin'ilay lohahevitra amin'ny antontan-taratasy fitaratra
3 Miteraha ny vokatry ny vera ao amin'ny Photoshop
3.1 Ataovy avo roa heny ny fisafidianana ny vera
4 Fetsy farany
Sokafy ny sary dia safidio ny lohahevitra
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny manokatra ireo sary roa izay hamorona ny photomontage, samy ao anaty antontan-taratasy misaraka. Mila sarin'ny a vera kristaly ary ny sarin'olona mipetraka. Andao aloha handeha amin'ny sarin-drazazavavy, dia hanomana azy hanampy azy amin'ny photomontage isika.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia dika mitovy ambadika. Azonao atao ny mamoha azy ary manoratra amin'ny baikon'ny solo-sainao + c ary rehefa + v (raha miasa miaraka amin'ny Mac ianao) na mifehy + c ary mifehy + v (raha miasa miaraka amin'ny Window). Amin'ity sosona vaovao noforoninay ity andao hifidy ilay zazavavy. Amin'ity tranga ity dia nampiasa ny fitaovana voafantina aho. Ankehitriny amin'ny fipihana eo amin'ny sary famantarana izay miseho marika eo amin'ny sary ambony, mamorona sarontava. Hamarino raha tsy misy tsy fahalavorariana, raha mahita ianao dia tadidio fa azonao atao ny manitsy azy amin'ny alàlan'ny fandehan'ilay sarontava sosona ary hosodoko aminy ilay borosy mainty hosaronany sy ilay borosy fotsy hahitanao azy. Ianao dia efa manana sosona miaraka amin'ilay zazavavy misaraka amin'ny aoriana, fa amin'ity dingana ity ho very ny aloka isika. Soa ihany fa afaka mamerina azy ireo isika.
Ahoana ny fomba hamerenana ny alokaloka Photoshop
Ny sosona etsy ambany dia mitazona ny aloka, ka andao hiverina any izy ireo. Afeno ny sosona ambony, ary mamorona sosona loko fanamiana volondavenona tsy miandany, apetraho midina hatrany.
Ankehitriny, hampiasa ny fitaovana hamafana vola, mety ho hitanao ao amin'ny bara fananganana raha mitazona ilay fitaovana famafana mahazatra ianao, ary eo amin'ny soson'ny tovovavy izay mbola tsy nasiantsika fanitsiana dia hofafantsika ny fototra fotsy sary, mitandrina fatratra tsy mamafa ny aloka.
Farany, ampiasao ny hamafana ara-dalàna, ary tendrony boribory miely sy milalao miaraka amin'ny opacity dia mametra ny toerana eo akaikin'ny alokaloka. Farany, mandehana any amin'ny "sary", "setting", "desaturate". Tsy mila manao afa-tsy ianao ovay ny fomba fampifangaroana manomboka amin'ny sosona ka hatramin'ny "Multiply" y fafao ny sosona volondavenona Amin'ity fikafika tsotra ity dia haverinay ny aloka!
Ento ny antontan-taratasy roa amin'ilay lohahevitra amin'ny antontan-taratasy fitaratra
Hisafidy isika samy sosona y Hataontsika eo amin'ny antontan-taratasy fitaratra izy ireo. Azonao atao ny mifantina ny sosona roa ary tariho izy ireo miaraka amin'ny fitaovana mifindra amin'ny antontan-taratasy hafa Vonona hanomboka amin'ny photomontage izahay!
Ampifandraiso ireo sosona roa amin'ilay zazavavy mba hahafahany mitantana azy ireo mora kokoa. Soraty amin'ny baikon'ny soloanao + t (raha miasa miaraka amin'ny Mac ianao) na mifehy + t (raha miasa miaraka amin'ny Window ianao) ary mampifanaraka ny habe amin'ny haben'ny vera. Ahodino kely ny sary mba mifanaraka ihany koa ny fomba fijery. Aza adino ny manindry ny bokotra safidy (Mac) na alt (Windows) mba tsy hiova endrika. Miaraka amin'ny famafana manala ireo sisiny izay mety ho hita ny fiaviany izay nesorinay tamin'ny dingana teo aloha.
Miteraha ny vokatry ny vera ao amin'ny Photoshop
Ankehitriny isika dia hamorona io vokatr'ilay vera io izay hita fa ao anaty vera ilay zazavavy. Voalohany, okolokoloy ny sosona an'ny zazavavy. ankehitriny mankanesa any amin'ny sosona vera ary safidio. Azonao atao ny mampiasa ny fitaovana fisafidianana izay tianao, amporisihiko ianao hampiasa ilay fitaovana fifantina zavatra na ilay fitaovana fifantenana haingana. Raha hitanao fa tsy tena marina ny safidinao dia azonao atao ny mampiasa ny maody fanaovana maska ​​haingana hanitsiana ireo lesoka.
Ataovy avo roa heny ny fisafidianana ny vera
Tsy maintsy mandika ny safidinao ianao. Mba hanaovana izany dia mila manoratra fotsiny ny baiko + c sy ny baiko + v (Mac) na ny fibaikoana + c ary ny fifehezana + v (Windows) amin'ny solosainao. Ankehitriny, apetraho eo amboniny ny sosona vaovao hamboarina ary avelany hita ny sosona rehetra. Milalao amin'ny fahamendrehan'ity sosona vaovao ity dia afaka manomboka manahaka izany vokatra fitaratra izany aho, fa hasehoko anao ny fomba matihanina bebe kokoa hanaovana izany!
Mandehana any amin'ny "sary"> "toe-javatra"> "tsy maharitra”. Ary avy eo mandehana any Haavo "Image"> "setting"> "”Miaraka amin'ilay menaka mainty dia hiditra ianao mandra-pahazoanao ny loko mainty sy fotsy sisa. nytendrombohitra ovay ny fomba fampifangaroana ho "raster" Hahay namorona izany vokatra izany ianao! Ary ahoana?
Alohan'ny hamaranako dia avelao aho haneho anao fika hafa izay hahatonga ny sarinao sarimihetsika ho zava-misy bebe kokoa. Ny vera dia mirona hanimba ny zava-drehetra izay ao anatiny na ao aoriana, azontsika atao ny manahaka izany. Eo amin'ny kapaoty ny zazavavy mankanesa any amin'ny tabilao "sivana", "blur", "gaussian blur". Ao amin'ny fikandrana fikandrana effets izay misokatra ho azy dia apetaho amin'ny 0,3 na 0,4 eo ho eo, dia ampy izay.
ankehitriny mankanesa any amin'ny «sivana», «distort», «zig Zag ", ary handeha isika hamindra ny masontsivana izay hita ao amin'ny fikandrana fikandrana effets mba hanovana kely ilay zazavavy.
Safidy iray hafa mahaliana ihany koa ny fampidinana kely ny opacity an'ny soson-jazavavy. ka tsy misy an'ireo loko mahery ireo. Raha misy fiovana mahery vaika eo anelanelan'ny sary roa dia azonao atao ny manamboatra azy. Avelako ianao eto mampifandray lesona iray izay anazavako tetika tena tsotra iray ampifanaraho amin'ny feon'ny sary roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba fanaovana montage sary tsotra ao amin'ny Photoshop
LIDA ANGELICA MORENO dia hoy izy:
Valiny tamin'i LIDA ANGELICA MORENO
Teoria miloko: torolàlana fototra hanambarana loko
Mandalas handoko maimaim-poana ary vonona ny hisintona